Ubuqhetseba bobutyebi sele sele bubuhlungu (ubuninzi bobuyisela) - HienaLouca
Juni 8, 2018 Dianne Reeves Anecdotes
Sawubona, I-CRAZY HIEN! Ixesha lebali elinomdla, kuba ngamanye amaxesha kulula ukuthetha ngokulula. Kwaye unethuba, kubandakanywa nokuzisa into ejikelezile.
Ngoko ... Ndithukuthelele kakhulu inkolelo, ubutyebi kunye nenethiwekhi ye-hysteria malunga nale nto. Kwaye mna kakhulu buhlungu ngabo baye bavumela leli fane, engaqondanga, enyanisweni, ukuba icala flip lo mzobo kunye nesibini smiling, ngaphantsi apho kubhaliwe kwathiwa malunga nezigidi yokuqala 30 iminyaka kunye self-nophuhliso - yeyona ukunuka. Ngokuqhelekileyo lo mthunzi, apho ukuyeka zonke iintonga.
Ndiza kunika imizekelo emibini enethuba lokunyanzeliswa ukuba bacinge ngabantu abakhalazayo ngobomi kunye nemeko yabo, okusolakala ukuthi akapheki nantoni na, ikhula okanye iqhube ngaphezu kwentloko. Kwaye kunokwenzeka ukuba uyakwazi ukuqonda, eqinisweni, edibeneyo kunye neendlela zokuncoma ukuthula, kwaye apho kukho ukukhala okukhulu, akukho mali enjalo kwintsimi ethile.
U-Masha ugula ngeenyanga ezintandathu ngenxa yobomi obuhlwempuzekileyo, obuyimpunga nobunzima, echukumisa umfana wakhe emlonyeni wesithunzi somntu oneminyaka engamashumi amathathu ubudala, kubonakala ngathi unakho konke. "Bonke" bacinga ukuba babetha ebusweni, amabali malunga nendlela epholile ukuba ibe nebhizinisi lakho kunye nesihloko sokuhamba eThailand, apho ngaphandle kwabo.
UMas akazi, loo mbini unenkxalabo ngendlela yokungcatsha ngokufanelekileyo komlingane, ishishini likhupha ama-ruble angamawaka amabini ngamandla. Thailand - akukho iminqweno umda kwaye ibonisa furore enkulu, kwaye sibini kuphela nje ipropati yabucala kutshanje ezifunyenwe, kule minyaka 7 wayehlala nezalamane. Umnyaka wama-Masha 20, insizwa yakhe ishukumisa indawo yokuhlala kwindawo ephakathi kwedolophu, ifumana izipho, iguqulwe kwaye igqoke. Ewe, ngaphandle kokunethezeka, kodwa akubi ngaphezu komnye umntu. Kwi-metropolis yethu, ziphakathi kweklasi. Yaye le Masha isebenza ngokubanzi kwi-10 ukuya kumawaka alishumi elinambini kwaye ihlala noomama. Kodwa uMas ufuna enye into. Kungcono ngokuthe ngqo kumzuzu. Ngenxa yokuba ngeembadada photo ebukekayo kubhaliwe kwathiwa, enyanisweni kuyimfuneko ukugcina ukuya ku 30 ukwenza million, ukuze kuvumeleke ngokwakhe ikhefu xa ufuna khona kwindawo enkulu ephilayo enkulu, badle yoKutya kwaselwandle e kwiziko idumileyo le sixeko. Ndiqwalasela ngokucacileyo isibini ngokuthe ngqo, umbutho kunye nawo ulahlekile, ngenxa yokuba ulawulo lokukhwabanisa egameni lomdwebo obalaseleyo kunye nexesha lokudinwa.
U-Irina akazange athengiswe ngokukhawuleza kwindlu. Kodwa ndadibanisa waza waba ngumntu ocebileyo kwiinyanga ezimbalwa. Kwiingcamango zakhe. Amakhulu amabhinqa amancinci avela kwikomkhulu lethu afuna ukubonelelwa. Kutheni i-Irina engazange ifotwe ekhaya lakhe kwaye ngezolo kwakuphakathi kwekhofi kwidlo lesidlo sasemini kunye nesheke eliphakathi kwemithi engamakhulu amathathu, ukufothula i-noodle ephazamisayo? Ngenxa yoko, ngokwenene, ukuba uthathe isicaba esilula kwaye ufunde kuphela ukutshiza, kodwa sele sele eyinkulu kulabo abasondezayo kwaye unikezela oko kuyifunayo. Kwaye ndandiyifumene. Kwaye ndiyabona, babeza kufumana amaxesha amaninzi, banokuvula i-ofisi yabo okanye i-salon.
Ndandifuna ukuthetha. Ungazami ukugxuma phezulu ngaphezu kwentloko yakho kwaye uyeke ukukholelwa yonke into, eqinisweni, yintoni echazwe kumnatha. Kwimeko ukuba naziphi na ubunokufumana ithuba ukusuka zava emakhaya ibile million engange, akukho mntu ange basebenza abarhwebi, nabamasango, oonobhala kunye nabasebenzi bezonyango. Ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuba enyuka ezivenkileni, yiya kwi awayesibawela Thailand, sihlale esofeni, yaye kumaxesha ngamaxesha ukutshintshela iimali ukuxhasa ekudalweni bot ukuba ebendisebenza ngayo.
Ukufikelela kunokwenzeka, ndiyavuma. Kodwa ngeli xesha, iqonga le babesaba, ndiyabona ngeenxa zonke kuye eziliqela labantu batyakatywa, thelekisa nomfanekiso wena ke agqiba kwinqanaba ngokwasemzimbeni lokohlwaya mna kuba okunene ukuba ubomi babo akakabi ibukeka esifana nesakho zibonisa ezinye self-wavakalisa osisityebi abantu.
Bantwana, hlalani apha kwaye ngeli xesha. Ubomi. Ukuphumelela - kukufezekisa into ozama ukuyenza, ukuzama ngokwenene. Umntu uyaphupha iqhwa ugqirha elungileyo kwaye abe nabo ukufezekisa yezigcawu, kuquka kwimeko kuya kuba ngaphantsi kwamashumi amane amawaka., Omnye uya kukuzuza furore ngokufunda Japanese, ngenxa yokuba nje eli phupha lakhe nabani na uloyiso - kukuba unentsapho enkulu, nokuba ingenasidlangalaleni, kodwa isandi kwaye inobungane. Kwaye omnye umntu, imali yalinganisa impumelelo. Ngaloo ndlela kuphela okokugqibela okufundayo nokusebenza, kwaye ungenzi ukubuyisela kwakhona ngokucaphuno. Kodwa ke ngoku nina alangazelela ukuba impumelelo, yaye kuloo nto, eneneni, kufuneka wabelane iminqweno yoluntu, nto leyo wagqiba slukavit ngathi ngokwawo uphila iziyolo ze bazibonele ngokwabo ukukholisa abaphulaphuli ukuzazisa lobuqu.
Okwangoku, ngokuqinisekileyo kuyaxhamla. Mamela i-sbe. Cinga ngento oyifunayo, wena nje, kungekhona umfazi wakho oyintombi, amaqabane okanye uhlobo oluthile lwabantu abanolwazi apho.
Ngendlela, akuyinto yesiko ukuba i-luxury ibonise ubutyebi bayo kwinethiwekhi. E gameni lokukhusela, ubutyebi kunye nobutyebi.
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-898, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
Ndifuna umfazi ongenamabango kwi-wallet yam. Yaye yintoni umfazi efuna?
Imizekelo yamathambo evela kwi-tattoos yaseMelika ebiza kakhulu
Iisokisi ezikhohlakeleyo nezikrakra (i-21 ifoto epholileyo)
I-Crochet kunye ne-taxidermy kulabo bazondayo ukulimaza izilwanyana
Imizobo ye-Classic ifakwe kwimihla yamhlanje, kwaye iphelele
Izinto zezindlu Zijika kwiimpawu ze-Smart
Umfaki-zithombe wezilwanyana uthatha iifoto zeekati kwi-catnip, kwaye iyinto ebalulekileyo.
Бесплатные деньги онлайн XCHARX 11 шагов, чтобы собрать $ 1800 с разных компаний
Qaphela: ezininzi iisayithi zisebenza kuphela nabemi baseU.S. kodwa kukho ezinye iinguqu. Ngubani othi ushizi wamahhala kuphela kwi-mousetrap, kodwa ungazama? Iifemu zonyaka zinika ...
Post Previous:I-adapter entsha ye-USB-C enegunya le-30 ithathe indawo yomzekelo we-29 V
Okulandelayo Post:Ndifuna umfazi ongenamabango kwi-wallet yam. Yaye yintoni umfazi efuna?
Emily Ratajkowski shows off her toned torso in a… (4)
Brett Kavanaugh’s school: beach parties, sex… (4)
Markets Proper Now: Shares waver; market nears bull file (2)
Link between Trump campaign and Russia during 2016… (2)
Monkeys are drugged and experimented on ‘at… (2)
Popular fashion retailer Revolve is under fire for… (2)